TS Editor: Olee dezie TS Files
> Resource> Video> Olee dezie TS Files
Isiokwu a bụ a zuru ezu nkuzi na esi edezi TS faịlụ, gụnyere trimming, cropping, isonyere, n'usoro n'usoro, n'ịgbanwe mmetụta na-agbakwunye dị iche iche Personalization ọcha dị ka music, PIP, ederede wdg
Ihe niile ị chọrọ bụ ọkachamara ma mfe na-eji TS nchịkọta akụkọ. Wondershare Video Editor (Filmroa maka Mac (Si Wondershare Video Editor for Mac)) nwere ike ịbụ ihe kasị mma oke maka gị. Na nza nke pụrụ iche edezi atụmatụ, ọ nwere ike ka ị ọsọ ọsọ na mfe ike jụụ n'ụlọ fim na gị TS video faịlụ.
Part 1: Olee dezie TS File
Part 2: Best Video edezi Software maka Beginners dezie TS File
Ugbu a, m ga-egosi gị otú iji nke a nwere ọgụgụ isi TS edezi ngwá ọrụ dezie TS faịlụ na kpochapụwo atụmatụ dị ka mkpụbelata, gbawara n'etiti, & akuku, nakwa dị ka hazie gị TS faịlụ na Foto dị na-na-na foto, music, nzacha, ikwu n'ụzọ & Ọzọ.
Olee otú dezie TS File
1 Import TS faịlụ ka onye ọrụ album
Mbubata TS faịlụ site na gị na kọmputa na-uku a TS nchịkọta akụkọ nke edezi, dị nnọọ pịa "Import" nhọrọ n'elu-n'akụkụ aka ekpe nke isi interface. Ozugbo, ị ga-ahụ ihe niile kwukwara TS faịlụ na-depụtara na ọrụ 'album.
2 Dezie TS faịlụ
Ọzọ, ịdọrọ otu ma ọ bụ multiple TS faịlụ site na Album ka usoro iheomume na ala na-amalite edezi videos.
TS nchịkọta akụkọ - Jikọọ na obere vidiyo ọnụ
Iji sonyere abụọ ma ọ bụ ọtụtụ obere vidiyo ọnụ, dị nnọọ ndokwa ha na usoro iheomume dị ka play iji. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịgbanwe na iji, dị nnọọ ịdọrọ na dobe video clip ka kpọmkwem ebe ị chọrọ ke na usoro iheomume. Ma mara na ị na-adịghị ịdọrọ otu clip ọzọ, ma ọ bụ ị ga-kewaa ya.
TS nchịkọta akụkọ - Bee a video clip
Ọ bụrụ na ị chọrọ kewaa a video clip, dị nnọọ pịa ya na usoro iheomume, ịdọrọ n'elu nke red Time egosi na ọnọdụ na ị chọrọ, mgbe ahụ kụrụ "scissor" button ime ya.
TS nchịkọta akụkọ - akuku, bugharia, mgbanwe video & audio mmetụta na ọsọ video
Right pịa gị chọrọ video clip na usoro iheomume wee họrọ Dezie nhọrọ. Na mmapụta edezi windows, ị nwere ike bugharia, akuku, ọsọ videos na mgbanwe video mmetụta. Ma ọ bụrụ na ị na-ahọrọ "Audio ikwụpu" nhọrọ Kama, ị nwere ike nweta ihe audio track nke video. Na mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ihichapụ ma ọ bụ dezie ọdịyo clip site righting pịa ya.
TS nchịkọta akụkọ - Tinye akụkụ, PIP, ikwu n'ụzọ, Intro / Ebe E Si Nweta na ọdịyo
Kụrụ gị chọrọ mma menu ke interface imeghe kwekọrọ ekwekọ akụ n'ọbá akwụkwọ. Na mgbe ahụ kpọmkwem ịdọrọ ọkacha mmasị gị template si akụ n'ọbá akwụkwọ na video clip na usoro iheomume. Ọzọ, ị nwere ike dezie template maka gị onwe gị video.
3 Ekekọrịta gị videos
Mgbe ị na mere ya, ị nwere ike see "Mepụta" button mbupụ gị e kere eke. Ị nwere ike ịhọrọ otu n'ime ihe anọ nhọrọ: Ngwaọrụ, Format, YouTube na DVD. Dị nnọọ ịkọrọ gị masterpiece gị na ezinụlọ gị na ndị enyi.
Part 2: Best Video edezi Software maka Beginners dezie TS File (Video Tutorial)
Olee otú dezie MTS / M2TS Video Files
Olee otú iji tọghata TS Videos na Windows 8 na Lossless Ogo
Olee otú iji tọghata TS ka MP4 na Mac OS X odum / Windows
Top 10 ihuenyo teepu App iPhone na gam akporo
Online cropping Ngwaọrụ: Olee otú akuku a Video Online
Olee otú Download ESPN Video